China Butt Lifter Panties Tummy Kudzora Slimming Muviri Shaper Kudzora Panty Sexy Lace Womens High Waist Shapewear fekitori nevatengesi | Yiyun
Asina kudhonzwa Bhatani-kusimudza Underwear
Vakadzi Vanoratidzira Vatema Nhema Hemline Mambokadzi Chikamu Butt Lifter Panties Tummy Kudzora Kusimudzira Muviri Shaper Kudzora Panty
1. 4 Masimbi Esimbi, Hapana Kusvibiswa, Hapana kutenderera
2. Yakakwira Chiuno Dhizaini, Ipa Dumbu Uye Chiuno Kudzivirira
3. Hip Enhancer & Gumbo Slim
5.Tummy Kudzora & Bhatani Inosimudza & Lifter Bottocks Panty & Yakakwira chiuno
6.Womens Yakakwira chiuno Lace Shaper
Chero chero sampu yatinogona kupa, mubhadharo unozodzosera kwauri mushure mekudaira
Pamutengo wepamhepo, unogona kutibata nesu
YIYUN yakakwira chiuno butt lifter ine tummy Kudzora kupinza kunoitwa mune yakakwirira elastic zvinhu, muzana nylon uye 15 muzana spandex.Comfortable, kufema, snug zuva rose.
Iyi YIYUN Shapewear kuva Dhizaini yakangwara, inosiya nzvimbo yakakwana yebeche rako uye inokwanisawo kutsvedza muchiuno, usine hanya ichadzvanya muhudyu uye zvakare ichapa zvakakwana kubutiro rako, wozoita kuti uwedzere kuvimba nehupenyu hwako hwezuva nezuva.
Iyo YIYUN tummy control & butt lifter zvipfupi panties, ine 3D-chiuno magadzirirwo, kugadzirisa buttock droop flat mamiriro, ichakubatsira iwe kuvakira peach chiuno, kubatsira bhurugwa rako rinotaridzika uye rakakura.
Ichi chisina Mupendero Lingerie yevakadzi chisingaoneki musono dhizaini, Iyo isingaoneki pasi pemhando ipi neipi yezvokupfeka.
Iro risinganyatsoonekwe, rakapfava uye rakanyorova, rakafanira senge rimwe ganda rako.
Yepamusoro-waisted Shapewear Butt Inosimudza Tummy Control Shapermint Abdomen Slimming Panty Muviri Shape Waist Mudzidzisi Rught slimming Seamless Elesticity Underwear lingerie yevakadzi. Iyo yakakwirira yakarukwa panty jira inokupa yakakwana compressions, asi iwe hauzonzwa kuzvidzora, simbi yacho yakapfava uye yakanyanya elastic.kuzvifunga, iwe unogona kunzwa wakasununguka, snug zuva rose.
Iyo Muviri sutu inoratidza yako chivimbo uye chimiro wako sexy muviri.
Sexy Lace dhizaini, huchi hwemhepo inovhara.Inogadziriswa, jira ganda, sezvakaita ganda rako repiri.
Kana iwe uine zvaunoda, hazvina basa bra kana chimiro, isu tiri nyanzvi. Ingonzwa Kusununguka kutibata nesu.
Sei tisarudze isu？ Just Zvakanyanya yakatsiga uye kukurumidza kupa.
Tine huwandu hwakakura hwezvinhu zviri mumasheya, whick inoita kuti tikwanise kukurumidza kuburitsa izwi, uye isu hatizopfuure hunhu hwehumhizha hwevatengi vedu.vakavaka chaiko kuvimba betweem kwedu mutengi uye us.Inga uine iwe kuda Kugadzira misika mitsva, Tichashanda nemoyo wose pamwe newe, tipe zvakanakisa mhando uye nyowani chigadzirwa chigadzirwa chako.
Saka ingonzwa wakasununguka kutibata nesu, kuhwina-kuhwina.
Ndokumbira utitumire email kana uine mibvunzo, tichakupindura mukati memaawa makumi maviri nemana.
Isu tinoshandira se 5 nyeredzi sevhisi nekumhanyisa kumusoro mapfumo edu, yedu yekufambisa chiyero & yedu yekufambisa frequency.
Tichaedza zvatinokwanisa kuti tigadzirise dambudziko rako uye nekuita zvaunoda. .Message ichapindurwa mukati memaawa makumi maviri nemaviri (vhiki rinowanikwa kwete)
Chero mibvunzo ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu, isu tichagadzirisa nekukurumidza sezvatinogona.
1.ExpressShipping neDHL / UPS / Fedex / TNT / EMS / Citylink nezvimwe zvine Door to Door service.Delivery
nguva inotora yakwana 3-7 mazuva ekushanda.
2.Airfreight: Kuendesa nguva inotora panenge 2-5 mazuva ekushanda.
3.Other Freight: Kutakura nguva inotora dzinenge gumi - 40 mazuva ekushanda.
4. Zvitorese isu kana kuronga kutumira kutumira kutumira mberi panguva yakatenderana.
1. Hupenyu Yakavimbiswa:
100% yemhando yekugutsikana yakavimbiswa, zvese zvinotumirwa zvichanyatso tariswa usati waendeswa.
Yakareba-yakagadzikana & kuwanikwa kwekugovera kune ese emhando yemhando yezvipfeko uye bra.OEM / ODM.Customized dhizaini
Ipa yemahara emapaketi dhizaini uye yekushambadzira zvinhu zvekusimudzira kwako.
China fekitori yakananga kuendesa nekukurumidza kutumira
Express (DHL / UPS / Fedex / TNT / EMS / Citylink), Airfreight, Gungwa Freight etc.
Kuvimbisa iwe Yega-kumira sevhisi yekukurumidza, inoshanda Pre-kutengesa sevhisi, Dhizaini, Dhizaini, Kudzora Mhando, Kutakura
Kutakura, Kutakura-kutengesa sevhisi nezvimwe.
Q1. Iwe uri fekitari kana kambani yekutengesa?
A: Isu tiri nyanzvi yemhando yepamusoro Mukugadzira vakadzi underwear pamusoro peasingaonekwi bra, shaper panties, nipple chivharo etc.
Q2. Ndingawana sei masampuli?
A: Isu tinogara tichipa samples kune vatengi vedu venguva dzose mahara .Kana iwe uri mutsva, isu tinopawo mahara sampuli kwauri, asi iwe unongofanirwa kubhadhara mutero wedhiza
Q3. Mungandipa mutengo wakanakisa here?
A: Ehe isu tinokwanisa kuziva, iwe unotenga zvinhu kubva kufekitori redu directlWe tinovavarira kuva nehurefu hwebhizimusi hukama newe uye kukupa iwo mutengo wakanyanya.
Q4. Ini ndinodzivirira sei kuraira kwangu?
A: Tine Yekutengeserana Assurance kwauri, iyo inova nechokwadi chekuraira kwako ndeye zvemhando yepamusoro uye kusvika kwauri panguva yakakodzera. Iyo Yekutengesa Assurance inogona kuchengetedza yako odha uye usanetseka nezvayo.
Q5. Ndinogona kuisa logo yangu yekugadzira pazvinhu?
A: Chokwadi, tinogona kuisa chiratidzo chako pane zvigadzirwa zvedu kana chero zvinhu zvatingagone kugadzira iyo logo nekupisa kupisa, skrini
kudhinda, silicon kudhinda, uye rubbentina embroiderede Ingova vhidhiyo yeAl logo fa.
Q6. Unoshanda neimwe hombe brand?
A: Ehe, isu tinoshanda nezvakawanda zvemhando huru muAustralia, USA, uye UK uye zvichingodaro.
Q7. Ndeupi mazwi ekubhadhara?
A: Kubhadhara kwedu
iterms ndeye T / T Paypal Chikwereti chemotokari, e-Kuongorora
Q8. Unodzora sei kunaka kwechigadzirwa?
A: Tine QA & QC department uye zvigadzirwa zvese zvichaongororwa 100% usati wapaka. Uye unogona kutumira yako QC timu kana kukumbira bato yechitatu kuti iongorore zvigadzirwa isu tisati tatumira.
Yepfuura: 2020 Vanhukadzi Vakatsemuka Musana Wechikono Asi Chisimiro Chiuno Muviri Shape Shapewear Vakadzi Tummy Dzora Vanasikana Slimming Panties
Postpartum Muviri Shaper
Shaper naButt Lifter
Shapewear Leggings Yakakwira chiuno
Shapewear Lingerie yevakadzi
Shapewear Vakadzi Tummy Kudzora
Tummy Kudzora Panty
Zvikuru zvevakadzi zvekumusoro zvakakwira chiuno tummy control p ...
Butt inosimudza panties inotakura buttocks tummy contr ...
Vakadzi tummy control shaperwear Seamless yepakati Wai ...
Yenyuchi Grid Inotema yeBrazil Tight Bhatani Lift P ...